Mgbawa ugwu ugwu Hawaii na -emepụta ike ikuku adịghị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Mgbawa ugwu ugwu Hawaii na -emepụta ike ikuku adịghị mma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbawa ugwu ugwu Hawaii na -ekepụta vog
A na -adụ ndị bi na ndị ọbịa na ndị Hawaii ọdụ ka ha dịrị njikere ma mara ọnọdụ gbara ya gburugburu, yana mmetụta ha ma ọ bụ nwee ike meghachi omume na vog - anwụrụ ọkụ mgbawa - na ikuku sitere na Big Island nke Hawaii.
N'ihi mgbawa nke malitere ụnyaahụ site na ndagwurugwu Halema'uma'u na elu ugwu Kīlauea Volcano, ọnọdụ vog na sọlfọ dioxide (SO₂) na -abawanye ma na -agbanwe.
Mmebi na -adị n'ime Ogige Ntụrụndụ Volcanoes nke Hawaii, agbanyeghị, ọnọdụ ikuku na -agbanwe agbanwe ebutela nsogbu ịdị mma ikuku na -adị n'etiti ọdịda anyanwụ nke nzuko ahụ.
Mpaghara emetụtara gụnyere Pahala, Nāʻālehu, Ocean View, Hilo, na East Hawai'i.
Ogo ikuku adịghị mma na ọkwa SO₂ na -abawanye kemgbe mmalite mgbawa nwere ike bute nsogbu na ahụike iku ume, ọkachasị ndị nwere nsogbu. Ọnọdụ na -agbanwe n'ike n'ike, na adịghị mma ikuku nke na -ebute mmetụta ahụike nwere ike bụrụ mpaghara.
N'ọnọdụ ọnọdụ vog, a na -adụ ọdụ ka ị kpachara anya:
Belata ihe ndị na -eme n'èzí na -akpata iku ume. Izere mmega ahụ na mmega ahụ n'oge ọnọdụ vog nwere ike belata ikpughe ma belata ihe egwu. Nke a dị ezigbo mkpa maka ndị otu nwere mmetụta dịka ụmụaka, ndị agadi, na ndị nwere ọnọdụ iku ume nke dịbu gụnyere ụkwara ume ọkụ, bronchitis, emphysema, na ọrịa ngụgụ na ọrịa obi.
Nọrọ n'ime ụlọ ma mechie windo na ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na -eji igwe ntụ oyi, tọọ ya ka ọ tụgharịa.
Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ịpụ na mpaghara emetụtara, gbanye igwe oyibo ụgbọ ala ya ma tọọ ya ka ọ gụgharịa.
Na -edobe ọgwụ mgbe niile ma dị njikere.
Ekwesịrị ka ewere ọgwụ kwa ụbọchị maka ọrịa iku ume na nhazi oge yana nwee ike inye nchebe pụọ na mmetụta nke sọlfọ dioxide.
Cheta na mkpuchi ihu na nkpuchi ejiri gbochie mgbasa nke COVID-19 anaghị enye nchebe pụọ na SO₂ ma ọ bụ vog.
Kpọtụrụ dọkịta ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ahụike ọ bụla.
A notụla sịga ma zere anwụrụ ọkụ sịga.
Na -a plentyụ ọtụtụ mmiri iji zere akpịrị ịkpọ nkụ.
Hazie ma kwadebe atụmatụ mberede ezinụlọ.
Gee ịdọ aka na ntị site n'aka ndị isi nchịkwa mberede steeti.
Ndị ọbịa na National Park nke ugwu mgbawa ugwu nke Hawai'i kwesịrị ịma na oke nkume na mgbawa nwere ike mepụta ntụ nke nwere iko mgbawa na iberibe okwute. Mgbapu mmiri ndị a na -anọchi anya obere ihe egwu, mana ntụ ntụ ga -ekwe omume na mpaghara gburugburu ọgbakọ Kīlauea.
Ngalaba Ahụike Hawai'i (DOH) na -agba ndị bi na ndị ọbịa ume ka ha jiri akụrụngwa ndị a na -enye ozi zuru oke, doo anya ma dị ugbu a na mmetụta ahụike nke vog, otu esi echebe onwe gị, amụma ikuku na ikuku, ịdị mma ikuku, ọnọdụ mgbanwe. , na ndụmọdụ ndị ọbịa:
Dashboard Ozi Haịngị Interagency Vog maka ozi ịntanetị zuru oke na nke kachasị ọhụrụ na vog na SO₂ sitere na ọrụ mgbawa ugwu.
Alaka ikuku dị ọcha nke DOH na-edobe netwọkụ nso-nso nke ndị na-enyocha ịdị mma ikuku nke na-achọpụta SO₂ na obere ihe.
Ndị United States Geological Society (USGS) Mmelite ugwu mgbawa Kīlauea.
Ọrụ Ntụrụndụ Mba ozi maka ịga na National Park Volcanoes National Vol.
Nduzi DOH na obere oge Ọkwa ndụmọdụ SO₂.